လမ်းလျှောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ။ ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်း စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Michael Serrano | | fit, အသုံးပြုနိုင်မှု
၎င်း၏ရိုးရှင်းနေသော်လည်း လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ခေါင်းတစ်ခြမ်းသို့ပြေးသွားပြီးခြေထောက်များနှင့်ပိုမိုမျှတသောစိတ်ကိုထားရှိစေသည်။
2.2 လှေကားတက်ခြင်း၊ သင်၏ခြေထောက်အတွက်အခြားကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု
စတင်, လမ်းလျှောက်ခြင်း၏အဓိကအားသာချက်မှာအလွန်လွယ်ကူသောလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး တည်းသာလျှင်ခြေတစ်ချောင်းကိုသာထားရန်လိုအပ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောလေ့ကျင့်ခန်းများမှာအဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင်ပိုမိုရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုခုမှတစ်ဆင့်ပုံသဏ္gettingာန်ရလိုသည်ဟုခံစားရသည်။
အခြားလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်မတူသည်မှာ မင်းဘယ်နေရာမဆိုလမ်းလျှောက်နိုင်တယ် (ဒါမှမဟုတ်နီးပါး) ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်၎င်းကိုမြို့တွင်းနှင့်တိုင်းပြည်တွင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ပြားသောနေရာများတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အဆစ်များကိုထိခိုက်မှုနည်းသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့်တွင်ရှိသူများ၊ ဥပမာအားဖြင့်ဒဏ်ရာရပြီးသောသူများအတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မည်သည့်အထူးကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်နေရောင်ကာကွယ်ရန်နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဖိနပ်များကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုသည်။ လမ်းလျှောက်နေစဉ်ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရန်ရေပုလင်းတစ်လုံးသယ်ဆောင်ရန်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုတော်သင့်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်ပြင်တွင်အချိန်ပိုပေးနိုင်ရန်ကူညီပေးခြင်းကြောင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်သင့်စိတ်အတွက်လည်းကောင်းသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ကြပါစို့။
ပုံမှန်လမ်းလျှောက်သွားခြင်းကသင်၏နှလုံးနှင့်အရိုးများကိုခိုင်မာစေသည်။ ၎င်းသည်ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးနှင့်ကိုလက်စထရောအပါအဝင်ရောဂါအမြောက်အများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ခံနိုင်ရည်၊ ခွန်အားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးများလာမှုကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့လိုပါကဤလေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်သင့်ကိုအဆီလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ဖိစီးမှုအလွန်ခံစားရသည်ဟုခံစားရပါကသို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲပါကလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ကူညီနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည် ပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်နှင့်ပိုပြီးမျှတတဲ့စိတ်ကို ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုများထဲတွင်ပါဝင်သည်။
လမ်းလျှောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ အနည်းဆုံးတော့ပိုပြီးမကြာခဏလမ်းလျှောက်ဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သင်၏ကားကိုသွားရန်ကားဂိုဒေါင်သို့နောက်တစ်ခေါက်သွားသည့်အခါသင်ပျောက်ဆုံးနေသောအရာအားလုံးကိုသတိရပါ၊
လမ်းလျှောက်ခြင်း၏ရလဒ်များကိုအောက်ပိုင်းစွန်းတွင်အထူးသတိပြုမိသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်သင်၏ glute များ၊ quad များ၊ တံကောက်ကြောဒဏ်ရာများနှင့်နွားသငယ်များကိုအလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ လှေကားတက်ခြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်မှု၏အားသာချက်များ။ လှေကားတက်ခြင်းသည်ဘောင်းဘီတိုများတွင် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနောက်ထပ်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လမ်းလျှောက်လိုပါကသင်တသမတ်တည်းဖြစ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထိုစံပြသည်တစ်ပတ်၏နေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ရန်ဖြစ်သည်မိနစ် ၃၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောအချိန်များ၊ သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအဆင့်ပေါ်မူတည်။ ကြာချိန်နှင့်ပြင်းထန်မှုဘွဲ့ရ။
အရှိန်အဟုန်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းဟုယူဆရန်လမ်းလျှောက်ရန်အတွက်ရိုးရိုးလမ်းလျှောက်ရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ။ သင်သည်သင်၏နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုးစေပြီးကယ်လိုရီကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးသူတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လျင်မြန်စွာနှင့်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်လျှောက်လှမ်းရန်လိုအပ်သည်.
ထို့ကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း၏နိဂုံးတွင်သင်ကိုယ်တိုင်သည်အခြားလေ့ကျင့်ခန်းများနည်းတူပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးစုပ်ယူသင့်သည်။ သင်၏ကြွက်သားများနွေးပြီးသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်အနည်းငယ်ဆန့်သည်အထိဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်စတင်ရန်သတိရပါ။
လမ်းလျှောက်ရတာလွယ်ကူမြန်လွန်းသလား။ ထို့နောက် သင်၏လမ်းလျှောက်ခြင်း၏အခက်အခဲ၊ ကြာချိန်နှင့်ပြင်းထန်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုရန်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလမ်းလျှောက်ခြင်းမှတောင်ပေါ်သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းအထိလေ့ကျင့်မှုကြာချိန်ကိုရှည်စေသည့်လှည့်ကွက်ဟောင်းမှတဆင့်နည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အထက်ပါအရာအားလုံးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးထွားရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အခွင့်အလမ်းပေးရန်မည်သည့်အရာပင်ဖြစ်ပါစေ။
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ ခုခံရေးလေ့ကျင့်ခန်း။ အဲဒီမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့်အစွမ်းသတ္တိနှစ်မျိုးလုံးဖြင့်သင်၏ခံနိုင်ရည်ကိုဘယ်လိုတိုးမြှင့်မလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
တေးဂီတကိုနားထောင်ခြင်း၊ အခြားလူများနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အပြေးသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းများသည်သင့်အားပျင်းလာခြင်းကိုတားဆီးလိမ့်မည်။ သင်၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံပါ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။) ၏အခြားဖြစ်ပါတယ် မကြာခဏလှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်ဖို့ပျက်ကွက်ကြောင်းလှည့်ကွက်.
လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝတည်ဆောက်လိုပါကသင်၏လေ့ကျင့်မှုသည် cardio နှင့်အားဖြည့်လေ့ကျင့်မှုများကိုပေါင်းစပ်ရမည်။ ဒါပေမယ့်လမ်းလျှောက်ပါ အလေးမရရန်အားကစားရုံသို့သွားရန်မမေ့ပါနှင့်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » လမ်းလျှောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ